भारतकी राजकुमारी दक्षिण कोरियाकी महारानी ! – Saurahaonline.com
भारतकी राजकुमारी दक्षिण कोरियाकी महारानी !
एजेन्सी कात्तिक १८ । भारतीय राजकुमारी कोरियाकी पहिलो महारानी बनेकी थिइन्। यो कुरा सुन्दा जोकोहीलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। तर, आश्चर्य नमान्नुस्। १३ औं शताब्दीमा भारतको अयोध्याकी एक राजकुमारी दक्षिण कोरियाकी महारानी बनेकी थिइन्।
हियो ह्वाङ ओके १३ औं शताब्दीकी रानी हुन्। उनी जियुमग्वाङकी रानी थिइन्। कारकवंशको स्थापना यिनैले गरेको इतिहासमा जनाइएको छ। कोरियामा कारकव‌ंशका ६० लाख नागरिक कोरियामा रहेको तथ्यांक रहेको छ।
दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति किम डेइ जंग र पूर्वप्रधानमन्त्री हियो जियोंग र जोंग पिल किम यही वंश थिए भन्ने उल्लेख गरिएको छ। तिनै रानी जो कोरिया पुगेर भारत भने फर्किनन्। चिनियाँ भाषामा रहेको एक दस्तावेजका अनुसार कोरियाली राजासँग विवाह गर्नका लागि उनकै बाबुले दक्षिण कोरिया पठाएको जनाइएको छ।
कोरियाली ती महारानीकोे स्मारक भारतको अयोध्यामा रहेको सरयु नदीको किनारमा दक्षिण कोरियाले स्थापना गरेकोे छ। त्यही स्मारकको अवलोकन गर्न दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति पत्नी अर्थात् प्रथम महिला किम जोङ सुक ओके भारत भ्रमणमा आइतबार भारत आउँदैछिन्।
उनले सरयु नदीमा रहेको महारानीको स्मारकको अवलोकन गर्ने जनाइएको छ। चार दिने भारत भ्रमणमा रहने किमले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने भएकी छन्। कारियाको इतिहासमा राष्ट्रपति पत्नीको एक्लो विदेश भ्रमण १६ वर्षपछिको पहिलो जनाइएको छ।